The Hawker-Siddeley Harrier ugbo elu na ground ọgụ British pụtara na nkera nke abụọ nke 1960s. -Eji ọtụtụ mba, e ji wuo ya banyere 800 mbipụta na-abịa na navalized version ike nke na efe n'elu na ọgụ, nakwa dị ka elu version AV-8B Harrier II mgbe a US-British imekọ ihe ọnụ.
The Harrier bụ nke mbụ takeoff na vetikal ọdịda nyere ndị nọ n'ụwa. Na omume Otú ọ dị, ọ bụ kwa arọ ka e gbupụ ekwesị na ya ọgụ gia, tinyekwara eziokwu na nke a kpaa kụrụ ọnụ ga-eri ihe ndị mmanụ ụgbọala. Ọ bụ ihe kama eji dị STOVL (obere na-ahụ-anya ụgbọelu na vetikal ọdịda), ike nke na dị nnọọ tracks 180 mita ogologo. More info on Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/AV-8B_Harrier_II
Complete mkpọ, VC + omenala ụda + na ụdị na-textures. Aircraft ike nke na takeoff / vetikal ọdịda (STOL: Short-ahụ-Off na ọdịda)
DỊ MKPA: Gụọ akwụkwọ ntuziaka